Home » Akụkọ ụgbọ elu » Fraport iji buru ibu ọrụ maka njikwa na ịrụ ọrụ nke nyocha elele na ọdụ ụgbọ elu Frankfurt site na 2023
Fraport meriri nsogbu nkekọ
Gọọmentị German na-ejigide Nchịkwa Iwu. Nhazigharị etinyere na Mmụọ nke Mmekọrịta Site na Jenụwarị 1, 2023, ndị ọchịchị Gọọmentị Federal ga-ebufe ọrụ maka nzukọ, ịkwụ ụgwọ, njikwa, na arụmọrụ nke ụgbọelu ụgbọelu na Frankfurt Airport na Fraport AG.
Fraport AG na German Federal Ministry of the Interior, Building and Community (BMI) bịanyere aka na nkwekọrịta maka ịnyefe ọrụ njikwa nchekwa
Fraport na-ahụ maka nhazi, njikwa na arụmọrụ nke nyocha ọdụ ụgbọ elu
Ndị uwe ojii etiti ga-aga n'ihu na-enyocha nyocha - Nchebe ka bụ ihe kacha mkpa - BMI na Fraport ịmalite isi ọhụrụ na mmekọrịta ha
A na-achịkwa nnyefe a site na nkwekọrịta dị n'etiti Fraport AG na Federal Ministry of the Interior, Building and Community (BMI) nke ndị otu abụọ bịanyere aka na nso nso a.
Onye isi oche ndị isi oche Fraport AG, Dr. Stefan Schulte kwuru, sị: “Anyị ga-ewere njikwa nke nchekwa ụgbọelu na ọdụ ụgbọ elu Frankfurt site na 2023. Ọ bụ ezie na nke a gụnyere nnukwu ọrụ, ọ ga-enye anyị ohere itinye ahụmịhe na nka anyị na njikwa arụmọrụ nke nyocha ahụ. usoro - na - eduga na mbelata oge ichere, maka abamuru nke ndị njem niile. ”
Tupu ntiwapụ nke ọrịa coronavirus, oge ichere n'ọdụ ụgbọ elu Frankfurt bụ otu n'ime isi ihe kpatara mkpesa n'etiti ndị njem na ụgbọ elu. Site na ịnara ọrụ maka ọrụ nyocha, Fraport na-atụ anya itinye njikwa njikwa nke imirikiti usoro ndị njem na-eche ihu iji nweta arụmọrụ ka ukwuu ma nwee ike belata oge ichere.
Schulte kwukwara, sị: “Mkparịta ụka ndị a ha na Ministri na ndị uwe ojii Federal nwere bara ezigbo uru. Anyị chọrọ inye ekele anyị maka mmekọrịta na-arụ ọrụ nke ọma yana mmụọ ntụkwasị obi enwere n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Ọnụ, anyị ga-anọgide na-ahụ na nchekwa na nchekwa ndị njem ka bụ ihe kacha mkpa. ”
Na mgbakwunye na nhazi, njikwa na arụmọrụ nke nyocha nchekwa, Fraport ga-eburu ọrụ maka ị nweta ihe nchekwa site na Jenụwarị 1, 2023, yana ịgbakọ ụgwọ kwekọrọ na ọdụ ụgbọ elu.
Kpọsịsịsị, na nrube isi nke ndị uwe ojii etiti kọwara, Fraport ga-ekpebi
Mgbe emepere usoro nche ma mechie.
Ego ole ka a ga-etinye ndị ọrụ n’ahịrị ọ bụla.
Kedu ụdị ngwaọrụ BMI ga-enweta.
Kedu ngwaọrụ BMI a ga-etinye n'ọrụ na ya.
Etu aga - esi ahazi nche na usoro ihe.
Kedu ndị na-enye ọrụ ka a ga-ekwe ka ha mee nyocha.
Dr. Pierre Dominique Prümm, onye isi oche Fraport na Executive Director Aviation na Infrastructure, kọwara, sị: “Ndị uwe ojii Federal ka nọgidere na-ahụ maka okwu niile metụtara nchekwa ma kọwaa ihe ndị anyị ga-emerịrị. Nke a na-eme ka o doo anya na nchekwa bụ ụkpụrụ kachasị mkpa. ”
Yabụ, ọbụlagodi mgbe a na-ebufe ọrụ njikwa na Fraport, BMI ka bụ onye isi ndị nchekwa ụgbọelu kacha elu na Germany. Ministrylọ ọrụ na-akọwapụta ụdị nyocha nchekwa a ga-eme, yana akọwapụta ngwaọrụ ndị a ga-eji. N'ihi ya, ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ nchekwa ahụ ga-eme nyocha ahụ na Fraport AG, mana dịka nkọwa nke Ministry si dị, na n'okpuru ndị uwe ojii Federal. Ndị ọrụ ga-enyocha nyocha ga-enwerịrị ihe achọrọ ma nweta iru eru nke ndị gọọmentị kọwara.
Prümm kwukwara, sị: “N'ịchịkọta mmekọrịta chiri anya na ndị gọọmentị etiti, anyị ga-eme ngwa ngwa ịhazi atụmatụ akụrụngwa yana ịtọlite ​​usoro maka mmekorita n'ọdịnihu na ndị na-enye ọrụ maka nyocha nchekwa. A ga-ejikọtakwa atụmatụ na arụmọrụ nke usoro maka nhazi na arụmọrụ nke nyocha nchekwa na ụlọ ọrụ gọọmentị kwekọrọ na ụgbọ elu. "